Ampidino ny Nice Brawl Apk ho an'ny Android [2022 Mod]
Febroary 18, 2022 Janoary 10, 2022 by Reyan Ahmad
Milalao Brawl Stars ve ianao ary mahatsiaro ho sorena amin'ny entana lafo vidy? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ilay kinova nohavaozina tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe Nice Brawl. Io no rindranasa Android farany indrindra, izay manolotra ny fanomezana ny premium premium rehetra an'ny Brawl Stars maimaimpoana.
BS dia iray amin'ireo lalao Android tsara indrindra, izay manolotra kianja ady an-tserasera marobe. Misy mpilalao an-tapitrisany eran'izao tontolo izao, izay tia mandany fotoana malalaka amin'ity sehatra ity. Noho izany, raha mpilalao BS ianao dia tokony ho fantatrao momba ity app ity. Mijanona miaraka aminay fotsiny ary mahazoa ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ity app ity.
Inona no atao hoe Nice Brawl Apk?
Nice Brawl dia rindrambaiko Android mod, izay manolotra ny kinova Brawl Starts novaina tsara indrindra. Manome ny mpampiasa hahazo ny fanangonana tsara indrindra ny endri-javatra karama. Afaka mahazo maimaim-poana ny serivisy sy ny endri-javatra rehetra amin'ny lalao maimaim-poana ireo mpampiasa.
Ao amin'ny lalao dia misy endri-javatra samihafa azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa, anisan'izany ny Skins, Characters, power-ups, ary ny maro hafa. Amin'ity lalao mahafinaritra 3 vs 3 ity, ny mpilalao dia tsy maintsy manatevin-daharana ny ady amin'ny toetra rehetra. Misy tarehin-tsoratra samihafa misy manana hery samihafa amin'izany Lalao Mod.
Ny toetra amam-panahy tsirairay dia samy manana ny toetrany amin'ny lalao, izay misy ny fahasalamana, ny hery ary ny endri-javatra hafa. Noho izany, azonao atao ny misafidy mpilalao mifanaraka amin'ny lalao gameplay. Ny hoditra samihafa dia misy, izay misy akanjo, feo ary fiasa hafa.
Noho izany, raha te hiditra amin'ireo serivisy rehetra ireo dia misy fomba roa azo atao ho an'ny rehetra. Ny fomba tsotra dia ny filalaovana lalao ora isan'andro, izay saika tsy ho vitan'ny rehetra. Fa io no iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra hamahana ny endri-javatra mihidy rehetra amin'ny lalao.
Misy rafitra laharana misy, izay mitombo arakaraka ny filalaovan'ny mpilalao. Noho izany, isaky ny laharana dia hanokatra entana vaovao ianao. Ny fomba hafa dia ny mividy premium, izay tsy maintsy aloan'ny mpilalao. Ny fividianana premium dia iray amin'ireo zavatra lafo indrindra amin'ny gamer rehetra.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny safidy fahatelo ary tsara indrindra ho anao rehetra. Afaka mahazo ny fanangonana endri-javatra tsara indrindra rehetra ianao nefa tsy mandany vola na fotoana. Misy ho anao ny fanangonana hoditra. Noho izany, tsy mila mandany vola amin'ny hoditra ianao. Afaka mahazo maimaimpoana ny karazana sy fanangonana hoditra rehetra ianao.
Ny fanavaozana na ny herin'ny Star dia tsy voahidy ho an'ny endri-tsoratra rehetra, izay midika fa tsy mila manahy momba ny fampandehanana herinaratra ianao. Azonao atao avy hatrany ny manatanjaka ny endri-tsoratra rehetra ary mahazo hery kintana. Miaraka amin'ireo serivisy ireo sy ny maro hafa, ianao no ho mpilalao tsy resy amin'ny fotoana rehetra.
Misy endri-javatra bebe kokoa misy an'ity taonina ity ao amin'ity rindrambaiko ity, izay ahafahanao manana traikefa amin'ny lalao tsaratsara kokoa. Raha miresaka momba ny lalao hetsika ianao, dia PUBG no iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ka raha milalao PUBG koa ianao dia afaka mampiasa Dsnipers ESP.
Raiso ity kinova Mod ity ho an'ny Smartphone na Tablet anao hidiranao amin'ireo serivisy rehetra misy. Raha manana olana ianao amin'ny fisintomana an'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany hizarana ny olanao. Hamaha haingana ny olanao izahay araka izay tratra.
anarana Fifandirana mahafinaritra
Size 345 MB
Anaran'ny fonosana com.supercell.brawlstars
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.3 sy ambony
Ahoana ny fampidinana ny rakitra Apk?
Raha te hampidina ny kinova ofisialy ianao dia afaka mitsidika ny Google Play Store. Fa raha te-hisintona ny kinova Novaina ianao dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana, izay azo jerena ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Azo antoka ve ny fampiasana azy?
Araka ny efa fantatrao dia fampiharana an'ny antoko fahatelo izy io, izay tsy misy ifandraisany amin'ilay tompon'andraikitra. Nampiasa an'ity rindrambaiko ity izahay ary mandeha tsara ho anay izany, saingy tsy afaka manome karazana antoka manokana momba ny fiarovana izahay. Noho izany, raha vonona hampiasa azy ianao dia azonao atao izany amin'ny risikao manokana.
Maimaim-poana misintona sy mampiasa
Makà fanangonana hoditra maimaimpoana
Ireo endri-tsoratra mahery vaika
Sokafy ny fiasa Premium
Gems sy vola madinika maimaim-poana
Fanaraha-maso malefaka sy mamaly
Interface dia User-friendly
Tsy misy doka azo atao
Tsara Brawl Download ary alao ny fampiharana novaina tsara indrindra ho an'ireo mpilalao Brawl Stars hahazoana ny fanangonana endri-javatra sy serivisy tsara indrindra. Noho izany, raha te hanatsara ny fahaizanao milalao ianao dia ampiasao ity kinova mod ity ary ankafizo ny filalaovana.
Sokajy Games Tags Fifandirana mahafinaritra, Tsara Brawl Apk, Tsara ny fifandirana Download Post Fikarohana
Soap2Day Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
VMOS Pro Mod Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Leave a Comment hanafoana ny valin-
anarana karazana verinia Website
Tehirizo ny anarako, ny mailaka, sy ny tranonkalako amin'ny browser ity amin'ny fotoana manaraka hanehoako hevitra.
© 2022 APKOll.com - RIghts rehetra voatokana